Jubbooyinka & Sh/Hoose oo Alshabaab Duqeyn lagula beegsadey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Jubbooyinka & Sh/Hoose oo Alshabaab Duqeyn lagula beegsadey
Jubbooyinka & Sh/Hoose oo Alshabaab Duqeyn lagula beegsadey
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo diyaaradeed oo saacadihii la soo dhaafay ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobolada Jubbada Hoose & Shabeellaha Hoose.
Diyaarado dagaal ayaa la sheegay inay xalay duqeyn dhinaca cirka ah ka geysteen Saldhigyo ay Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ku leeyihiin Degmooyinka Jilib Iyo Jamaame oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiil Ciidan ayaa waxaa ay sheegeen in duqeynta ay sigaar ah loola beegsaday Saldhigyo ay leeyihiin Al-Shabaab,isla markaana lagu dilay Saraakiil katirsan Al-Shabaab.
Dhinaca kale warar kale oo la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in duqeyn kale ay xalay ka dhacday deegaanka xaramka oo dhaca Gobolka Shabeelaha Hoose,isla markaana lala beegsaday Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ay sheegeen in duqeyntaas lagu dilay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab iyo Xubno la socday oo marayay deegaanka Xaramka ee gobolka Shabeelaha Hoose,hayeeshee aysan bixin faah faahin dheeraad ah..
Si kastaba inta badan duqeymaha diyaaradeed ee ka dhaca Gobolada dalka,isla markaana laal beegsado Xarumaha Al-Shabaab ayaa waxaa sheegta Mareykanka oo Ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, iyaga oo sheegay inay ku dileen Saraakiil katirsan Al-Shabaab.